Mogadishu Journal » 2020 » October » 8
Nearly 700 military personnel killed in Nagorno-Karabakh:
US President Donald Trump said on Thursday he would not participate in a debate with Democratic presidential hopeful Joe Biden under a new format announced Thursday by the debates commission in which each candidate would appear at remote locations. The Biden campaign responded...
Somaliland oo War kasoo saartay Doorashada Xubnaha matalaya ee ka dhaceysa Muqdisho
Hargeisa:-Golaha Wasiirrada maamulka Somaliland Oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa si kulul uga hadlay doorashada xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda Somaliland ee ka dhaceysa Muqdisho.Kulanka golaha wasiirrada Somaliland yeesheen uu gudoomiyanayay Madaxweyne...
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Magacaabay Guddi Qaran Ee Aaska Marxuum Cali Khaliif Galeyr
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ugu horeyn Ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay geerida ku timid Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Marxuum Cali Khaliif Galeyr ayaa magacaabay Guddi Qaran oo ka shaqeynaya Aaska...
UNMAS Oo Tababar Ku Saabsan Burburinta Miinooyinka Ay Argaxisada Sameeyaan U Soo Gabogabeysay Ciidanka AMISOM
Hey’adda Miinooyinka Qaramada Midoobey UNMAS ayaa koorso ku saabsan qaabka loo baaro, loona burburiyo miinooyinka argagaxisado sameyso u soo gabagabeesay cutubyo ka tirsan ciidanka AMISOM . Tabarkan ayaa waxaa ka faa’iideystay ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Dhoobleey ee...
Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo geeriyooday iyo Masuuliyiin ka tacsiyadeesay
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlada deegaanka Soomaalida ku geeriyooday Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr oo sidoo kale xilal kala duwan kasoo qabtay dalka. Sida aan wararka ku helnay Cali Khaliif Galeyr ayaa labadii maalin ee...
Mesut Özil & Sokratis ayaa laga tagi doonaa kooxda Arsenal ee Europa League
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa magacaabi doona 25ka ciyaaryahan ee Europa League ee ka qeyb galaya ololaha soo socda Khamiista, iyadoo la filayo inay seegaan Mesut Özil iyo Sokratis Papastathopoulos. Midkoodna ma maamulin hal daqiiqo oo dhaqdhaqaaq ah xilli ciyaareedkan,...
Vice President Mike Pence and Democratic vice-presidential nominee Kamala Harris matched wits in a more substantive debate on Wednesday night than the presidential candidates engaged in last week, giving Americans a glimpse of what normal politics looks like. While more civil,...
Wararkii Ugu Dambeeyay Wadahadalo u dhaxeeyay Qoor Qoor iyo Ahlu Sunna oo fashil ku dhamaaday
Dhuusamareeb:-Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusomareeb ee caasimada Galmudug ayaa sheegaya in uu fashil kusoo dhamaaday wadahadalo u socday Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo xubno katirsan kooxda Ahlu Sunna. Madaxweyne Qoor Qoor ayaana Madaxtooyada...
Villa Soomaaliya oo Xildhibaano ka dhigeysa xubno kamid ah Xoogaga Wadaniyiinta !!
Muqdisho:-Waxaa dhawaan la filayaa in dalka ka dhacdo doorashada Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya , Gudoonka labada aqal iyo tan Madaxweynaha, waxaana hada bilowday diyaar garow xoogan oo doorashadaasi loogu jiro. Doorashada Xildhibaanada labada...
Maamulka Gobolka Banaadir Iyo Shirkadaha Gaarka Ah Oo Kala Saxiixday Hishiis Shaqo Abuur+Sawirro
Muqdisho:-Hishiiskaan ay kala saxiixdeen maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeega dad-weynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale oo waara loogu abuuri lahaa barakacayaasha iyo danka dantarta ah ee ku nool caasimada. Guddoomiye ku xigeenka...
Noole labo farood lahaa oo sanado badan kadib la helay (Sawirro)
Nooc cusub oo noole ah, oo u eg xayawaanka loo yaqaanno “dinosaur”, balse labo farood oo kaliya ku leh halkii gacanba, ilkana aan lahayn ayaa laga helay saxaraha Gobi ee waddanka Mongolia. Cilmibaadheyaal ka tirsan Jaamacadda Edinburgh ayaa gacanya ku dhigay qalfoof badan oo...
Musharaxiinta Xilka Madaxweyne Ku Xigeenka Mareykanka oo Xalay Dood adag yeeshay
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo u tartamaysa xilka madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimoqraadiga ayaa dood kulul oo ku saabsan cudurka safmarka ee coronavirus isku dhaafsaday is aragoodii koowaad ee xalay qabsoomay. Ms Harris ayaa Donald Trump ku...
Sargaalkii dilay George Floyd oo xabsiga laga sii daayay iyo Sababta keentay !
Maxkamad kutaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa damaanad kusii deysay sargaal katirsanaa ciidanka booliiska Mareykanka oo si arxadan daro u dilay George Floyd oo ahaa nin Madowga Mareykanka kasoo jeeda. Dilka sargaalkan u geestay ninka Madowga ah oo muuqaal laga...